MW Xasan oo soo gaabiyay socdaalkiisaa "Tareenka Nabadda" | KEYDMEDIA ENGLISH
MW Xasan oo soo gaabiyay socdaalkiisaa “Tareenka Nabadda”
MW Xasan ayaa muddo labo cisho ah booqasho ku joogay magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah ee maamulka Koofur Galbeed, ka hor inta uusan u safrin Galmudug khamiisti.
MUQDIAHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa soo gaabiyay socaalkiisa - Tareenka Nabadda - kaasoo maalmihii la soo dhaafay uu ku joogay magaalooyinka Baydhabo iyo Dhuusamareeb ee gobollada Bay iyo Galgaduud.
Madaxwynaha oo shalay gaaray xarunta maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa maanta ka soo laabtay, qorshaha ayaa ahaa inuu caasimadda dib ugu soo laabto 4-ta June ama galinka danbe ee Sabtiga, hayeeshee, arrimo isaga u gaar ah ayuu safarkiisa u soo gaabiyay.
Madaxweynaha maamulka Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye iyo masuuliyiin kale ayaa ka soo sagootiyay garoonka Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb, wuxuuna daqiiqado kadib ku soo wajanhan yahay, garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdiaho.
MW Xasan ayaa muddo labo cisho ah booqasho ku joogay magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah ee maamulka Koofur Galbeed, ka hor inta uusan u safrin Galmudug khamiisti, wuxuuna wadahadllo la qaatay madaxweynayaasha maamulladaas.
Caleemo-saarka Madaxweynaha ayaa qabsoomaya 9-ka bishaan, waxaana ka soo qeyb galaya inta badan Madaxda dalalka geeska Afrika, waana sababta socdaalka loo soo gabagabeeyay hal maalin la hor xilligii hore loo qorsheeyay.